ယုန်လေးရဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ကျောင်းမတက်ခဲ့ရတာကြောင့် မျက်ရည်လည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျော်စွာ – Suehninsi
ယုန်လေးရဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ကျောင်းမတက်ခဲ့ရတာကြောင့် မျက်ရည်လည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျော်စွာ
A4ကျော်စွာကတော့ ယုန်လေးရဲ့ဖေးမကူညီမှုနဲ့ ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးမှုရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကတည်းက ဆိုးမိုက်ပေတေမှုနဲ့ အသားကျခဲ့တဲ့ A4ကျော်စွာကတော့ အခုဆိုရင် သူယုံကြည်ရာဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရင်း ဘဝကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ယုန်လေးရဲ့ လက်ကမ်းခေါ်မှုနဲ့အတူ
” ဝမ်းစာ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ယုန်လေး၊ A4 ကျော်စွာနဲ့ မင်းZ တို့သုံးယောက် ဖန်တီးခဲ့ကြပြီး အခုနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ” စိတ်ကူး” ဆိုတဲ့သီချင်းလေး ချပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ မနေ့က “စိတ်ကူး” သီချင်းရဲ့ဗွီဒီယိုလေးကို ရိုက်ကူးရင်း အဖြူအစိမ်းဝတ်နဲ့ A4 ကျော်စွာရဲ့ပုံရိပ်လေးနဲ့အတူ “ဒီ မြင်ကွင်းလေးက ကျက်သရေ တော်တော်ရှိပါတယ်… ချစ်စရာ ကလေးလေး
နှစ်ယောက်နဲ့ A4 ကျော်စွာ.. ဒီအကြောင်းလေး ရိုက်မယ်ဆိုတော့ ကျော်စွာ ချက်ချင်းမျက်ရည်ဝဲတက်လာတယ် . ကျွန်တော် အဖြူနဲ့အစိမ်း တစ်ခါမှ မဝတ်ဖူးဘူး.. တကယ်ဝတ်ရတော့မှာလား ကိုကြီးတဲ့ (မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ချင်တဲ့ အခါကျရင် စိတ်ကူးလေး ယဉ်နေတာပဲ ကောင်းတယ်)” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမတက်ခဲ့ရတဲ့
A4 ကျော်စွာတစ်ယောက်ကတော့ “စိတ်ကူး” သီချင်းဗွီဒီယိုထဲမှာ ကျောင်းသားဘဝလေးကို ရလိုက်သလို ခံစားခဲ့ရမှာအမှန်ပါပဲ… ယုန်လေးပြောသလို မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျရင် စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာပဲ ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျောင်းသားဘဝမရခဲ့ဖူးတဲ့ A4 ကျော်စွာတစ်ယောက် ကျောင်းစိမ်းလေးနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “စိတ်ကူး” သီချင်းဗွီဒီယိုလေး ထွက်လာရင် အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။
A4ကြျောစှာကတော့ ယုနျလေးရဲ့ဖေးမကူညီမှုနဲ့ ပရိသတျအသိမှတျပွုအားပေးမှုရရှိခဲ့သူတဈယောကျပါ။ မိဘမဲ့တဈယောကျဖွဈသလို ငယျရှယျစဉျအခြိနျကတညျးက ဆိုးမိုကျပတေမှေုနဲ့ အသားကခြဲ့တဲ့ A4ကြျောစှာကတော့ အခုဆိုရငျ သူယုံကွညျရာဂီတခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးရငျး ဘဝကို အကောငျးဆုံးဖွတျသနျးနိုငျဖို့ ကွိုးစားနသေူတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ ယုနျလေးရဲ့ လကျကမျးချေါမှုနဲ့အတူ
” ဝမျးစာ” ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးကို ယုနျလေး၊ A4 ကြျောစှာနဲ့ မငျးZ တို့သုံးယောကျ ဖနျတီးခဲ့ကွပွီး အခုနောကျထပျတဈပုဒျအနနေဲ့ ” စိတျကူး” ဆိုတဲ့သီခငျြးလေး ခပြွနိုငျဖို့ ကွိုးစားနကွေပါတယျ။ ယုနျလေးကတော့ မနကေ့ “စိတျကူး” သီခငျြးရဲ့ဗှီဒီယိုလေးကို ရိုကျကူးရငျး အဖွူအစိမျးဝတျနဲ့ A4 ကြျောစှာရဲ့ပုံရိပျလေးနဲ့အတူ “ဒီ မွငျကှငျးလေးက ကကျြသရေ တျောတျောရှိပါတယျ… ခဈြစရာ ကလေးလေး
နှဈယောကျနဲ့ A4 ကြျောစှာ.. ဒီအကွောငျးလေး ရိုကျမယျဆိုတော့ ကြျောစှာ ခကျြခငျြးမကျြရညျဝဲတကျလာတယျ . ကြှနျတျော အဖွူနဲ့အစိမျး တဈခါမှ မဝတျဖူးဘူး.. တကယျဝတျရတော့မှာလား ကိုကွီးတဲ့ (မဖွဈနိုငျတဲ့ အရာတှေ ဖွဈခငျြတဲ့ အခါကရြငျ စိတျကူးလေး ယဉျနတောပဲ ကောငျးတယျ)” ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ကြောငျးမတကျခဲ့ရတဲ့
A4 ကြျောစှာတဈယောကျကတော့ “စိတျကူး” သီခငျြးဗှီဒီယိုထဲမှာ ကြောငျးသားဘဝလေးကို ရလိုကျသလို ခံစားခဲ့ရမှာအမှနျပါပဲ… ယုနျလေးပွောသလို မဖွဈနိုငျတဲ့အရာတှေ ဖွဈခငျြတဲ့အခါကရြငျ စိတျကူးယဉျလိုကျတာပဲ ကောငျးမယျဆိုတဲ့အတိုငျး ကြောငျးသားဘဝမရခဲ့ဖူးတဲ့ A4 ကြျောစှာတဈယောကျ ကြောငျးစိမျးလေးနဲ့သရုပျဆောငျထားတဲ့ “စိတျကူး” သီခငျြးဗှီဒီယိုလေး ထှကျလာရငျ အားပေးလိုကျကွပါဦးနျော။
Source : Yone Lay’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
ဝတုတ်နေလို့ အနှိမ်ခံရတဲ့ဘဝက လွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
(၄၃)နှစ်လို့ မထင်ရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းတဲ့ ယောကျာ်းဖြစ်သူကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဇနီး